Zvichaitika pakuparadzwa kweJerusarema (1-17)
Bvudzi remuprofita raazvigera rinoitwa zvikamu zvitatu (1-4)
Jerusarema rinonetsa kupfuura mamwe marudzi (7-9)
Vapanduki vanorangwa nenzira nhatu (12)
5 “Zvino iwe mwanakomana wemunhu, tora bakatwa rakapinza urishandise sechisvo chekugeresa. Gera musoro wako nendebvu dzako, wotora bvudzi racho woriyera pachikero uchiriisa muzvikamu zvikamu. 2 Uchapisa chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvebvudzi racho muguta pachapera mazuva ekukomba.+ Uchabva watora chimwe chikamu wochidimbura-dimbura nebakatwa kumativi ese eguta,+ uye uchamwaya chikamu chekupedzisira chebvudzi racho mumhepo, uye ndichavhomora bakatwa rekuvadzingirira.+ 3 “Unofanira kutorawo rimwe bvudzi shoma woriputira munguo yako. 4 Unofanira kutora rimwe bvudzi, worikanda mumoto, rotsva rese. Ipapo pachabva moto uchasvika kuimba yese yaIsraeri.+ 5 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Iri ndiro Jerusarema. Ndakariisa pakati pemarudzi, rakapoteredzwa nedzimwe nyika. 6 Asi rapandukira mitongo yangu nemirau yangu, richitoita zvakaipa kupfuura marudzi nenyika dzakaripoteredza,+ nekuti varamba mitongo yangu, uye havana kufamba mumirau yangu.’ 7 “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Nekuti mainetsa kupfuura marudzi akakupoteredzai uye hamuna kufamba mumirau yangu kana kuita zvandakataura mumitongo yangu, asi makatevera mitongo yemarudzi akakupoteredzai,+ 8 zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri kukurwisa, iwe guta,+ uye ini pachangu ndichaita zvandakakutongera, marudzi ese akatarisa.+ 9 Ndichakuitira zvandisati ndamboita uye zvandisingazomboitizve, nemhaka yemabasa ako ese anosemesa.+ 10 “‘“Saka vanababa vari pakati pako vachadya vanakomana vavo,+ uye vanakomana vachadya vanababa vavo, uye ndichapa mutongo pakati pako, ndoparadzira vamwe venyu vese vasara kumativi ese.”’*+ 11 “‘Saka neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘nekuti wakasvibisa nzvimbo yangu tsvene nezvidhori zvako zvese zvinonyangadza, nemabasa ako ese anosemesa,+ ini ndichakurambawo, ziso rangu harizonzwi urombo uye handizonzwi tsitsi.+ 12 Chikamu chako chimwe chete pazvitatu chichafa nedenda* kana kupera nenzara. Chimwe chikamu chacho chichaurayiwa nebakatwa kumativi ako ese.+ Uye ndichaparadzira chikamu chekupedzisira kumativi ese,* uye ndichavhomora bakatwa rekuvadzingirira.+ 13 Kutsamwa kwangu kuchabva kwapera, uye ndicharega kuvagumbukira, uye ndichagutsikana.+ Uye pandichange ndapedza kudurura kutsamwa kwangu pavari, vachaziva kuti ini, Jehovha, ndakataura, nekuti ndinoda kuzvipira kwakazara.+ 14 “‘Ndichaita kuti uve nzvimbo yakaparadzwa uye chinhu chinozvidzwa nemarudzi akakupoteredza uye nevanhu vese vanopfuura nepauri.+ 15 Uchava chinhu chinozvidzwa uye chinoshorwa,+ uchava yambiro uye chinhu chinotyisa kumarudzi akakupoteredza, pandichaita zvandakakutongera, ndakatsamwa, ndiine hasha uye ndichikuranga ndakashatirwa. Ini, Jehovha, ndazvitaura. 16 “‘Ndichavatumira miseve inouraya yenzara kuti ivaparadze. Miseve yandichatuma ichakuparadzai.+ Ndichaita kuti nzara yenyu iwedzere nekukushayisai kwekuwana zvekudya.*+ 17 Ndichakutumira nzara nezvikara+ zvinotyisa uye zvichakuurayira vana. Denda neropa zvichakushayisa zvekuita uye ndichakurwisa nebakatwa.+ Ini, Jehovha, ndazvitaura.’”
^ ChiHeb., “kumhepo yese.”
^ Kana kuti “nechirwere.”
^ ChiHeb., “pandichatyora tumiti twenyu twechingwa.” Zvingava zvichireva tumiti twaiisirwa chingwa.